यो आन्दोलन, सपना र मेरा नजर « paniphoto
« “शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!” आन्दोलनको प्रतिकारले देखाएको संकेत »	यो आन्दोलन, सपना र मेरा नजर
By -पानीफोटो- on Thursday May 06, 2010	-प्रा.डा. अभि सुवेदी-
अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले सडकमा जे गरिरहेको छ, यो पनि आन्दोलन हो । किनभने, उनीहरू निश्चित अनुशासनभित्र रहेर आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिका लागि लडिरहेका छन् । यो दिशाहीन र ध्वंसपूर्ण पनि छैन। किन आन्दोलन गरिरहेका छन् ? यसमा उनीहरूले प्रस्ट विचार अगाडि सारेका छन् । कसैलाई उनीहरूको तर्क सही लाग्ला, कसैलाई गलत । तर, हामीले नागरिक भएर हेर्दा उनीहरूसँग आन्दोलनका केही बलिया आधार छन् भन्ने लाग्छ । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेका कदमपछि बनेको सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी भएकै हो । सरकारले शान्तिप्रक्रिया र संविधान बनाउनुभन्दा पनि सत्तालाई बढी ध्यान दियो । जिम्मेवार मन्त्रीहरूले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे । विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप बढेर गयो । यस अवस्थामा माओवादीले ‘नागरिक सर्वोच्चता’ र ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’को विषयमा उठाएका मुद्दाको आधार त्यति कमजोर देखिँदैन । यी कुराको समीक्षा गर्दा उनीहरूसँग आन्दोलन गर्ने आधार देखिन्छ । तर, आन्दोलनको जुन विधि माओवादीले अपनाए, त्योचाहिँ ठीक भएन । आन्दोलनका सजिला अन्य विकल्प पनि थिए । त्यसलाई प्रयोग गरेको भए देश, जनता र स्वयं माओवादीकै लागि पनि राम्रो हुन सक्थ्यो । आन्दोलनको आधार बलियो भए पनि विधि सही भएन भने त्यसको परिणाम गलत आउन सक्छ । अहिलको विधि प्रयोग गरेर आन्दोलन गर्नु निकै हतारो भयो ।मे १ देखि सुरु आन्दोलनमा प्रत्येक दिन म सडकतिर गइरहेको छु । कुनै राजनीतिक उद्देश्यसाथ आन्दोलनकारी भएर होइन, आन्दोलनको विषयमा जानकारी लिन गएको हुँ । आन्दोलन कसरी भइरहेको छ ? सहभागी कहाँ/कहाँबाट छन् ? तिनका सपना कस्ता छन् ? यिनै जिज्ञासा बोकेर ठमेल, सुन्धारा, कलंकी क्षेत्रको आन्दोलनमा हेर्न गएँ । धेरै सहभागीसँग कुराकानी गरेँ । अहिले म एउटा निष्कर्षमा पुगेको छु- यो आमहडतालले आन्दोलनको नयाँ मानक स्थापना गरेको छ । आन्दोलनका पुराना मान्यता भत्काइदिएको छ । यो आन्दोलन सहर र सडककेन्दि्रत छ । तर, यी सबै गाउँबाट आएका मान्छे छन् । सुकिलो सडकमा गाउँले जमात उर्लिएको छ । धेरै अनुहार उदास छन् । बाहिरबाट यस्सो हेर्दा ती अनुहार थकित र निर्दोष देखिन्छन् । तर, विचारले प्रतिबद्ध छन् । उनीहरूको अठोट भयानक छ । आफ्नो कुरा नहिच्किचाई अरूसामु राख्न सक्छन् । यस्तो आन्दोलन युरोप र भारतमै पनि नभएको होइन । तर, त्यहाँ गाउँदेखि आन्दोलनकारी सहर पस्दा गाउँकै समस्या लिएर जान्थे । भारतमा गाउँले किसान आन्दोलन गर्न दिल्ली पुगे । तर, गाउँकै समस्या राखे । युरोपतिर पनि गाउँबाट आन्दोलन गर्न आन्दोलनकारी सहर गए । तर, उनीहरूले पनि गाउँकै समस्या बोले । गाउँबाट यता पसेका उनीहरूले गाउँको समस्या या मागबारे बोलेका छैनन् । अहिलेको देशको राजनीतिक माग नै गाउँलेको पनि माग बनेको छ । देशको चिन्ता छ, तिनलाई । मैलै कुराकानी गरेका धेरै सहभागी काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखालगायतका जिल्लाको ग्रामीण भेगबाट आएका थिए ।
« “शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!” आन्दोलनको प्रतिकारले देखाएको संकेत »	LeaveaReply Cancel reply	You can use these HTML tags
यही Category बाटयुक्रेनमा के भइरहेको छ ?के फरक छ पश्चिमा र हामी बिचमा ? तस्विर हेर्नुहोस्विद्यार्थीको बाँदर प्रवृति – तस्विर हेर्नुहोस्फिल्मीपात्रका अनौठा रोगहरुयस्ता मान्छे पनि हुँदा रहेछन्, भिडियो हेर्नुस् नजनावरहरुको झगडाका रमाइला तस्विरहरुजनावरहरुको झगडाका रमाइला तस्विरहरु – १साना केटा गीत राम्रो गाउँदा रहेछन् (भिडियो हेर्नुस्)अचम्मका 3D पेन्टिङहरु !!नवरात्रिमा पूजा हुने नवदुर्गाहरु !Online Users7 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार